'Return of Superman' ၈နှစ်ပြည့်အတွက် အမှတ်တရစကားလေးတွေ ပြောခဲ့ကြတဲ့ ဂျူမုံရဲ့ Song သုံးမွှာပူး
လူကြီးလူငယ်မရွေး စိတ်အပန်းဖြေဖို့အတွက် ကြည့်ရှုကြတဲ့ အစီအစဉ် KBS2’s ‘The Return of Superman’ ကတော့ ၈ နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို အဖေဖြစ်သူက ထိန်းကျောင်းရတဲ့ အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပြီး ကလေးပိစိလေးတွေရဲ့ ဖြူစင်လွန်းတဲ့အပြုအမူလေးတွေ၊ အပြောအဆိုလေးတွေကြောင့် လူကြိုက်များတဲ့အစီအစဉ်လည်းဖြစ်လာပါတယ်။
ဆောင်အီဂွတ် (ဂျူမှုံ) ရဲ့ သားအမွှာပူး ၃ ယောက်ကတော့ အစီအစဉ်မှာပါဝင်ရင်း လူတိုင်းလောက်က ချစ်ကြတဲ့ ကလေးတွေပါ။ ၈ နှစ်ပြည့်မှာတော့ ဂျူမှုံရဲ့သား (၃) ယောက်ဖြစ်တဲ့ Daehan, Minguk, Manse ဟာ အထူးဧည့်သည်တော်တွေအဖြစ် ပါဝင်လာခဲ့ပြီး ဂုဏ်ပြုစကားလေးတွေ ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အင်္ကျီဆင်တူလေးတွေဝတ်ပြီး ပေါ်လာခဲ့တဲ့ ဆောင်အမွှာ (၃) ယောက်ကတော့ တော်တော်လေးလည်း ထွားပြီး စကားတွေတတ်နေခဲ့ပါပြီ။
အကြီးဆုံးလေးဖြစ်တဲ့ Daehan က “အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ‘The Return of Superman’ အစီအစဉ် ၈ နှစ်ပြည့်အတွက် ကျွန်တော်တို့ညီအစ်ကို (၃) ယောက်က လိုက်လှဲစွာ ဂုဏ်ပြုပါတယ်” ဆိုပြီး ဦးစွာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အလတ်ကလေး Minguk ကတော့ “ကြည့်ရှုသူ‌တွေအားလုံး ပျော်ရွှင်တဲ့နေရက်တွေကိုပဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်” လို့ ဆန္ဒပြုခဲ့ပြီး Manse ကတော့ ရီရင်းနဲ့ “‘The Return of Superman’ မှာ ထပ်ပြီး ပါရမလား? မပါရမလား? ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ (၃) ယောက်သား ငြင်းခုံပြောဆိုခဲ့ကြသေးတယ်” ဆိုပြီး စကားတတ်တတ်နဲ့ ရီမောကာပြောခဲ့ပါတော့တယ်။
‘The Return of Sup‌erman’ ကတော့ ဆောင်အီဂွတ်ရဲ့သား (၃) ယောက်ပါတုန်းက တော်တော်လေး လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ အမွှာ (၃) ယောက်ရဲ့ အထူးအပိုင်းကတော့ နိုဝင်ဘာ (၁၄) ရက်နေ့မှာ ပြသသွားမှာပါ။ မိဘနဲ့ကလေးတွေရဲ့ ထိန်းကျောင်းပြသနည်းတွေကို ကြည့်ရှုရင်း စိတ်အမောဖြေနိုင်ပါစေနော်။
Next Tomboy ဆန်ဆန် ပုံစံအသစ်ကို ရုတ်တရက် ချပြပြီး ပရိသတ်​တွေရဲ့ နှလုံးသားကို အရည်​ပျော်​​စေခဲ့တဲ့ Song Ji Hyo »
Previous « ၂၁ ရာစုရဲ့လက်​တွေ့ဘဝ​တွေကို မှီငြမ်းဖန်တီးထားတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်ကား​တွေထဲက ဇာတ်​ကောင် (၄) ခု